अनुष्का श्रेष्ठले जितिन मिस नेपाल २०१९ को ताज
आइतवार, कार्तिक ७, २०७८ ०५:३५:१४
शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६ नेपालबोट समाचारदाता
बैशाख २६, काठमाडौं । सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस नेपाल २०१९’को उपाधि अनुष्का श्रेष्ठले जितेकी छन् । आज भएको फाइनलमा अनुष्काले सबै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उपाधि जितेकी हुन् ।
प्रतियोगिताको अन्तिम राउण्डमा ७ जना छानिएका थिए । अनुष्काले सात जनालाई पछि पार्दै ‘मिस नेपाल २०१९’को उपाधि हात पार्न सफल भएकी हुन् । उनलाई ‘मिस नेपाल वर्ड्र २०१८’की शृङ्खला खतिवडाले ताज पहिराएकी हुन् ।
यस्तै, ‘मिस नेपाल यूनिभर्स’को उपाधि प्रदिप्ता अधिकारीले जितेकी छिन् । ‘मिस नेपाल अर्थ’को उपाधि रिया बस्नेत र ‘मिस नेपाल इन्टरनेशनल’को उपाधि मिरा कक्षपतिले हात पारेकी छन् । त्यस्तै यस पटक मिस नेपाल सुप्रानेशनल भनेर नयाँ उपाधि पनि थपिएकोमा उक्त ताज रोज लामाले पहिरिएकी छन ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६, १२:०५:००
ठकुरी वस्तिमा गौरा पर्वको रौनक
१५ महिनापछि सिनेमा हल खोल्ने तयारी, तर सञ्चालक अन्यौलमा
काँग्रेसको २१ जिल्लामा क्रियाशिल सदस्यता सार्वजनिक हुन बाँकी
‘चरी जेलैमा’ परिवन्द होइन राजीखुशीले ! हिट तर गुमनाम गायिकाको कथा
बुधवार, भदौ ९, २०७८ नेपालबोट समाचारदाता
६ दिनअघि युट्यूवमा सार्वजनिक भएको ‘चरी जेलैमा’ गीतको सिर्जना र कम्पोजिसन विष्णुकै श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीले गरेका हुन् । भिडियो निर्देशन पनि उनकै हो । विवाहपछि पत्नीलाई ‘पिँजडा’ मा कैद गरेर राखेको आरोप खेपिरहेका सुन्दरमणिले नै ‘चरी जेलैमा’ को सिर्जना गरी पत्नीलाई नै गाउन दिनु एकप्रकारको ‘आइरोनी’ हो । पुरा पढ्नुहोस्
आइतवार, भदौ ६, २०७८ नेपालबोट समाचारदाता
उपन्यासको इतिहासकार एवं हिमाली अध्ययनका ज्ञाता डा. रमेश ढुंगेल, मानवअधिकारवादी सुदीप पाठक, पूर्वसचिव एवं साहित्यकार डा. सुधा शर्मा र आख्यानकार मालिका केशरीले संयुक्त रुपमा विमोचन गरे । पुरा पढ्नुहोस्